प्रचण्डकी बुहारी विना यसरी मन्त्री बनिन्, उर्जाका हिराे जनार्दन शर्मा त्यसरी फालिए ?
चैत ३, काठमाण्डाैँ ।
माअाेवादी केन्द्रका प्रभाशाली नेता जनार्दन शर्मा प्रभाकरलार्इ मन्त्री हुनबाट बन्चित गरिएकाे छ । तर पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डकी बुहारी विना मगरलार्इ मन्त्री बनार्इएकाे छ ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तेश्रो पटक मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दा उनकाे नाम मन्त्री मण्डलमा परेकाे छैन् । ओलीले एमालेबाट ९ मन्त्रि तथा माओवादी केन्द्रबाट ६ मन्त्री थप गरेका हुन्।
एमालेबाट नवनियुक्त मन्त्री हुनेमा प्रदीप ज्ञवालीले परराष्ट्र , गोकर्ण विष्ट श्रम तथा रोजगार मन्त्री, रवीन्द्र अधिकारीले पर्यटन मन्त्रालय पाए भने रघुवीर महासेठले भौतिक पुर्वाधार मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् । शेरबहादुर तामाङ कानुनमन्त्री बन्ने बनेका छन् । त्यस्तै जगत विश्वकर्मा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, लालबाबु पण्डित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री (हेरफेर) भएका छन् ।
त्यस्तै राज्यमन्त्रीमा गोकलु बास्कोटालाई सञ्चार राज्यमन्त्री, पद्मा अर्याललाई पनि राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ । धनबहादुर बुढाले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन राज्यमन्त्रि बनेका छन् । ।
त्यस्तै माओवादी केन्द्रबाट भने वर्षमान पुन अनन्तलाई उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ भने गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षा मन्त्रालय त्यस्तै शक्ति बस्नेत वनमन्त्री भने चक्रपाणि खनालले कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी बुहारी विना मगर खानेपानी मन्त्री बनेकी छिन् ।माओवादीले रामकुमारी चौधरीलाई कृषि राज्यमन्त्री बनाएको छ।
यसरी मन्त्री बनिन् बिना
केहि समय अघिदेखि नै बिनालाई मन्त्री बनाउन ससुरा प्रचण्ड पनि लागिपरेका थिए। पति प्रकाश दाहालको मृत्यु भएको केहि महिना मात्रै भएकाले पनि सहानुभुति दिना पनि मन्त्री पद दिनुपर्ने भन्दै बिनाका पक्षमा माओवादीका केहि नेताहरु देखिएका थिए ।
बिना प्रदेश नम्बर ७ बाट नेकपा माओवादी केन्द्रकी एक्ली महिला सांसद पनि हुन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका सात नम्बर प्रदेश ईन्चार्ज लेखराज भट्टले पहिले नै खुमलटार पुगेर पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमक्ष बीनाको नाम केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रीका लागि सिफारिस गरेका थिए ।
कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट वाम विजयी भएकी मगर प्रदेश नं ७ बाट प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने एक्ली महिला पनि हुन् । उनि अहिले खानेपानी मन्त्री बनेकी छिन् ।
यसरी फालिए जनार्दन शर्मा
रामबहादुर थापाले गृह पाएपछि सुरुमा यस मन्त्रालयमा इच्छा देखाएका जनार्दन शर्मा ऊर्जाका लागि लबिङमा थिए।
पहिला ऊर्जामन्त्री हुँदा राम्रो काम गरेकाले ओली पनि उनलाई सरकारमा भित्र्याउन चाहन्थे । उनले पुष्पकमल दाहाललाई पनि शर्मालाई समेट्न भनेका थिए ।
मन्त्रीको सूचीमा उनको नाम शुक्रबार बेलुकासम्म राखिएको थियो । तर, वर्षमान पुन ऊर्जाबाट अर्को मन्त्रालयमा जान नमानेपछि शर्मा सरकारमै नजाने निर्णयमा पुगेको माओवादी स्रोतले जनायो। शर्मा मन्त्रीको लाइनबाट बाहिरिएपछि चक्रपाणि खनाल अटाएका हुन्। शर्मा पर्व गृहमन्त्री पनि हुन् ।
गत फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले सोही दिन सानो मन्त्रिमण्डल गठन गर्दे लालबाबु पण्डितलाई जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री र थममाया थापामगरलाई महिला तथा बालबालिका मन्त्री बनाएका थिए।
फागुन १४ गते ओलीले दोस्रो पटक मन्त्रिमण्डल गठन गरी एमालेका दुई मन्त्रि इश्वर पोखरेललाई रक्षा, युवराज खतिवडालाई अर्थ मन्त्री बनाएका थिए भने माओवादी केन्द्रका तर्फबाट रामबहादुर थापा बादललाई गृह र मातृका यादवलाई उद्योग मन्त्री बनाएका थिए।
प्रकाशित मिति : २०७४ चैत्र ३ गते शनिवार
माओवादीबाट मन्त्री बन्ने लाइनमा लागेका काे-काे छन् ?
रक्सी खाएर दाङमा आफ्नै बुबाले गरे १२ वर्षीया छाेरीलाइ बलात्कार
परिक्षा बिग्रिएको भन्दै विमलाले गरिन् आ’त्मह’त्या